UNESCO eto Madagasikara Ahiana ho nisy fanodinkodinam-bola ?
Mamofompofona fanodinkodinam-bola ao amin' ny COMNAT na komisionim-pirenena eo anivon’ny sampandraharahan’ny firenena
mikambana misahana ny fanabeazana sy ny siansa ary ny kolontsaina na UNESCO eto Madagasikara, raha ny loharanom-baovao iray. Araka ny voalazan’io vaovao io hatrany dia nisy ny vola tsy mazava nirotsaka ao anatin’ny kaontin’ity UNESCO COMNAT ity. Ankoatr’izay dia vola mitentina 15.000 dolara ihany koa no voalaza fa tsy fantatra ny fomba ampiasana azy hatreto. Heverina ho anisan’ireo tsy afa-miala amin’ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ny sekretera jeneralin’ny sampana voalaza, raha ny loharanom-baovao hatrany, ary heno ihany koa fa mialokaloka ao anatin’ny maha mpikambana eo anivon’ny antokon’ny fitondrana azy ity farany noho io raharaha io. Ho hita eo moa ny vokatry ny fanadihadiana ataon’ny tompon’andraikitra mahefa.